Ho ferana ny specimen omena ho an’ny kandid mandritra ny fampielezan-kevitra mba hitsitsiana ny tetibola. Tsy misy volan’ny kandida na avy amin’ny fanjakana miodina mihitsy amin’ny fanontana ny bileta tokana fa an’ny Ceni ihany ny vola ampiasaina. 10.500.000 no atonta hatramin’ny 3 mey.
NY FILOHA NO AO AMBADIKA
Ny filohan’ny Repoblika mihitsy no tao ambadiky ny fandrotsahana ho solombavambahoaka azy roa vavy ministry ny mponina sy ministry ny fanabeazam-pirenena. Fantatra fa manana hery politika matanjaka izy roa vavy ireo ka ilain’ny filohan’ny repoblika amin’ny fahamarinan-toerany any amin’ny distrika misy azy. Efa tsy navela nanatrika filan-kevitry ny ministra itsony ihany koa izy mirahavavy nanomboka tamin’ity herinandro ity
ARETINA MAHAVOA NY ZAZA
Vao lasa ny kitrotro, miditra indray ny aretina hafa bronchiolite izay mahavoa zaza maro amin’izao. Manodidina ny 40 isan’andro ireo zaza tratrany ao amin’ny hoitalin’ny tsaralalana. Ireo zaza roa taona no tena tratran’ity aretin-tratra ity ary tena mahasempotra azy ireo mihitsy. Tsy voatsabon’ny antibiotique anefa ilay aretina ka tsy maintsy tazomina any amin’ny hopitaly ny ankabeazan’ireo zaza tratra.
Notanterahina omaly ny fanomezam-boninahitra farany ilay zandary maty am-perin’asa tany Tsaratanana. Tao amin’ny tobin’ny Fign izay niasany no nampiakarana azy ho zandary kilasy faharoa ary ny mari-boninahitra Chevalier de l’Ordre National. Nanafatra mafy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny tss tokony ivarotan’ny mpitandro ny filaminana basy sy bala satria amin’ny farany dia ireo miaramila mpiara-miasa ihany no matin’izany
FANENDAHANA ENY AMBOHITSOA
Amin’ny enina ora hariva dia efa raikitra ny fanendahana eny Ivanja Ambohitsoa. Vola 600.000 ariary sy karatra maro no lasan’ireo olon-dratsy. Tsy nitsoaka lavitra akory ireo fa nijanona teo amin’ny toeram-pisotroan-toaka teo amin’ny manodidina ihany. Tonga teny ny polisy rehefa nampandrenesana saingy tafaporitsaka daholo ireo olon-dratsy ireo izay efa manana mpitsikilo matanjaka eo amin’ilay tanana.Mitaraina ireo mponina fa efa misesy izany fanendahana izany tato ho ato ary mamely an-tanana ihany ireo jiolahy
MINISITRA MANDEHA ANY IVELANY
Feno tanteraka ny fandaharam-potoanan’ny minisitra amin’ny fandehanana any ivelany. Ny an’ny sasany aza dia efa ho iray volana maninjitra no tsy ho eto mihitsy fa vao tonga dia mandeha indray. Mihazakazaka amin’ny fanaovana mission any ivelany avy ny tsirairay ary raha vao misy fanasàna dia efa tsy tàna. Izany ve no hatao hoe manaja ny politikam-pitsitsiana izay napetraky ny filoha. Rediredy avokoa no misy eto.
Namoy ny ainy koa omaly ilay renim-pianakaviana izay nodarohina sy notsatohana zava-maranitra tao Analakininin, Hopitaly Be. Izy io anefa dia mitondra vohoka koa ary dia niara-maty taminy koa izany ilay zaza tao an-kibony. Raha tsiahivina dia afak’omaly no niditra an-tsokosoko tao an-tranony ny lehilahy iray izay mpiasany taloha ary namaly faty namono azy sy ny zanany. Ny zanany iray no maty tsy tsa-drano fa izy kosa mbola tonga teny amin’ny hopitaly vao namoy ny ainy.
Efa misy amin’ireo kandida ho depiote sahady no mifandrahona eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ireo izay tsy tafiditra IRD dia tezitra mafy ary ireo tafiditra kosa dia miseho milay ka mahatonga ny fahasorenan’iretsy voalohany. Nisy tranga iray izay efa saika tonga tamin’ny fifampitoriana mihitsy saingy mbola samy nahatsapa ny roa tonta fa samy manao propagandy aloha. Ahiana hipoaka ity raharaha ity atsy ho atsy.